Ama-Amphibians, ukulahlekelwa okukhulu kokushintsha kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Yize ukuguquka kwesimo sezulu kubeka usongo lwangempela kuzo zonke izitshalo nezilwane zomhlaba, kunezinhlobo ezithinteka kakhulu kunezinye. Enye yezinhlobo eziyohlupheka kakhulu imiphumela emibi yokufudumala kwembulunga yonke kuzoba zonke izilwane eziphila ezweni nasemhlabeni.
Ukulahlekelwa okukhulu kakhulu kuzokwenzeka kulo lonke elaseSpain, lapho izinhlobo eziningi zizogcina zingasekho ngenxa yamazinga okushisa aphakeme kanye nenqubo yokuwomisa okuzothwala izindawo ezahlukahlukene zenhlonhlo. Ngokuqondile, ingxenye yaseMpumalanga Andalusia Kuzoba isisulu esikhulu ngoba kuyindawo ebucayi kakhulu ekushintsheni kwezinga lokushisa.
Izilwane eziphila ezweni nasemanzini njengamanje ezigcwele eMhlabeni yizinhlobo ezikwazi ukusinda ekuguqukeni kwesimo sezulu okwenzeke amakhulu eminyaka. Noma kunjalo, ukuqina nokusheshisa kokushintsha kwesimo sezulu njengamanje kubangela izinhlobo eziningi zezilwane eziphila ezweni nasemanzini ukuba zinyamalale ngokushesha. Ama-Amphibians angenye yezinhlobo ezithinteka kakhulu ekushintsheni okungazelelwe kwesimo sezulu, ngakho-ke basengozini enkulu kakhulu kuneezinye izinhlobo zezilwane.
Ngeshwa, eminye yemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu abantu base-amphibian baqala ukuhlupheka kubo. Ngale ndlela, amazinga okushisa aphezulu abekhona eminyakeni yamuva adale izibungu abakwazi ukuqeda i-metamorphosis yabo okubangela ukwehla okukhulu kwesibalo sasemanzini. Ngaphezu kwalezi zinkinga ezisobala nezingokoqobo ezibeka lolu hlobo engcupheni, ukufudumala kwembulunga yonke okuhlupheka kubangela ukuthi indawo lapho izilwane zasolwandle zikhula khona iguqulwe kakhulu futhi yangcoliswa okunomthelela omubi empilweni yezilwane eziphila ezweni nasemanzini uqobo.
Njengoba ukwazi ukubona, ukuguquka kwesimo sezulu Kuyinkinga yangempela ukuthi umhlaba wonke uhlupheka yingakho izixazululo zale nkinga kufanele zisetshenziswe ngokushesha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ama-Amphibians, ukulahlekelwa okukhulu kokushintsha kwesimo sezulu